Shubham Sharma - ALinks
About the Author: Shubham Sharma
Bangiyada ugu Fiican Iiraan
June 8, 2021 Shubham Sharma Banks, Iiraan, lacag
Bangiyada Iran, sida adduunka intiisa kale, waa ganacsi aasaasi ah. Dalka hada waxaa kajira in kabadan 42,000 oo ATM ah sidoo kale waxaa jira ATM cusub oo maalin walba laga soo saarayo qeybaha kala duwan ee dalka. Kuwani
Adeegyada bangiyada ee Kuweyt
June 4, 2021 Shubham Sharma Banks, Kuwait, lacag
Kuweyt hadda waxay leedahay kow iyo toban bangiyada wadaniga ah. Bangiga Dhexe ee Kuweyt wuxuu nidaamiyaa bangiyada dalka, wuxuu hubiyaa xasilloonida Dinar Dinar, wuxuuna u shaqeeyaa sidii bankerka iyo lataliyaha dhaqaalaha ee dowladda. Qeybaha bangiyada ee Kuweyt, sida laga soo xigtay Moody's, waa mid adag, oo ku xiran
Glucometers-yada ugu fiican Hindiya 2021
June 3, 2021 Shubham Sharma Hindiya, waxyaabo waxtar leh
Maalmahan tirada cudurada ayaa marba marka ka dambeysa sii kordheysa. Sonkorowgu waa mid ka mid ah cudurada ugu caansan. Cudurka macaanku sidoo kale si aad ah ayuu ugu soo badanayaa wadankeena kiisaskiisana waxaa la arkaa koror sanad kasta. In kastoo
Mashiinka ugu Fiican ee Kormeerka BP ee Hindiya
Waxaa laga yaabaa 28, 2021 Shubham Sharma Hindiya, waxyaabo waxtar leh
Adduunkan maanta, qaab nololeedkeennu aad buu u dhakhso badan yahay, mana la jaan qaadi karno caafimaadkeenna. Cuduro kala duwan ayaa ku soo badanaya muwaadiniinta. Inaad naftaada iyo xubnaha qoyskaaga si wanaagsan uga ilaaliso cudurradan, kormeer cadaadiska dhiigga
Sidee shaqo looga helaa Iswiidhan? Tilmaam deg deg ah oo loogu talagalay dadka raadinaya shaqooyinka.
Waxaa laga yaabaa 26, 2021 Shubham Sharma shaqo, Iswidhan
Iswiidhan waa waddan Scandinavian ah oo ay ku nool yihiin tobanaan kun oo jasiirado xeebeed iyo biyo mareenno macaan iyo keymo waaweyn oo ceel biyo leh iyo buuro dhalaalaya Stockholm, caasimada Sweden, bariga iyo Göteborg iyo Malmö, labaduba waa magaalooyin xeebeed
Sidee shaqo looga raadsadaa NETHERLANDS?
Waxaa laga yaabaa 26, 2021 Shubham Sharma shaqo, safarka, waxyaabo waxtar leh
Nederland, waxaa jira rajo badan oo shaqo oo ajaanibta ah. ING Group, Royal Dutch Shell Group, Unilever, Philips, iyo Heineken waa wax yar oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee adduunka iyo kuwa caalamiga ah ee Holland ugu yeera guriga. Waxaa jira shaqaaleysiin badan
Xisaabiyeyaasha Sayniska ee ugu Fiican Ardayda injineernimada!
Waxaa laga yaabaa 7, 2021 Shubham Sharma Hindiya, waxyaabo waxtar leh
Baahida loo qabo xisaabiyaha sayniska ayaa sii kordheysa iyadoo tirada ardayda iyo xirfadleyda baranaya injineernimada iyo teknolojiyadda macluumaadka ay sii kordhayaan. Fadlan eeg liistada hoose ee loogu talagalay Calculators Sayniska ugu fiican ee injineernimada iyo fasallada dhismaha, oo ay ku jiraan Casio Calculators Calio iyo
Kooxda ugu fiican Smart ee Hindiya 2021
Waxaa laga yaabaa 5, 2021 Shubham Sharma UK, waxyaabo waxtar leh
Qalabka la xidho ayaa ka soo gudbay gimmick ilaa ficil. In kasta oo taleefannada casriga ahi leeyihiin codsiyo kormeer jimicsi oo tirin kara dhaqdhaqaaqyada, haddana ma aha kuwo lagu kalsoonaan karo ama muuqaal-hodan ku ah raadraacayaasha jimicsiga. Raad-raacayaasha jimicsiga ayaa sii kordhaya iyadoo dadku noqdaan kuwo maanka ku haya
1 2 3 ... 14 Xogta ku xiga»